सम्बन्धविच्छेदमा महिलाभन्दा पुरुष अगाडि ! - Everest Dainik - News from Nepal
सम्बन्धविच्छेदमा महिलाभन्दा पुरुष अगाडि !
घोराही, कार्तिक १६ ।
देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू भएसँगै पारपाचुके अर्थात सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउनेहरुमध्यै महिलाभन्दा पुरुष बढी देखिएका छन् ।
पछिल्ला साढे २ महिना (भदौ १ देखि कात्तिक १५) को तथ्यांकअनुसार सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने पुरुष बढी देखिएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस सम्बन्ध विच्छेदको प्रमुख कारण दुबैले फरक टेष्ट चाहानु : कुसुम भट्टराई
अदालतका स्रेस्तेदार चुडामणि रेग्मीका अनुसार उक्त अवधिमा ६१ पुरुष र ५७ महिलाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
उक्त संहितामा पुरुषले पनि अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएकाले मुद्दा दर्ता गराउने पुरुष बढ्न थालेको मुख्य न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस डिभोर्सका लागि अदातलमा कस्ता महिला आउँछन् ?
सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्नुमा पारिवारिक असमझदारी, वैदेशिक रोजगार, हतारको निर्णय, स्वतन्त्र रहन चाहनु नै रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले भदौ १ गतेदेखि देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू गरेको हो । प्रशासनडटकमबाट